DHAGEYSO: Xassan Sheekh “Sharci Ma ah in Sheekh Mukhtaar Roobow uu Haatan Doonayo Madaxtinimo” – Puntlandtimes
DHAGEYSO: Xassan Sheekh “Sharci Ma ah in Sheekh Mukhtaar Roobow uu Haatan Doonayo Madaxtinimo”
October 19, 2018 Puntland PL
LONDON(P-TIMES)-Madaxweynihii hore ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa si adag uga hadlay Musharaxnimada Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo horey uga mid ahaa Madaxda Sare ee Kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab, oo haatan u taagan Hoggaanka Maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ayaa Sheegay in Mukhtaar Roobow uu yahay Muwaadin Soomaaliyeed, balse uu ka tirsanaa Urur Argagixiso ah, uuna ilaa iyo hadda Cadeyn inuu ka baxay iyo in kale, oo kaliyana la og yahay inay is dagaalsan yihiin Isaga iyo Al-Shabaab.RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGEYSATO.
Waxaa uu Sheegay inaysan Wanaagsaneyn in Roobow uu Hada isku soo taago Qabashada Hoggaanka Dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed oo qeyb ka ah Soomaaliya, Isagoo kamid ahaa Urur Dhibaato badan u geystay illaa hadana ku haya Shacabka Soomaaliyeed.RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGEYSATO.
RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGEYSATO.
Xisaab la’aantu waa tan somalia dhibta uga bixi weydey
fiqi aar says:
adna markad madaxwaynaha ahayd sootaad xaasaskaaga iyo ilmahaga farqaha u buuxisay gabdhihi somaliyeedna booyeeso ahan sucuudiga kaga iibsatay
siciid cabdulle says:
sida aan filayo wax udiidaayaa majirto mar hadaan dastuurku qeexayn qofku waxa uu aaminsanaan jiray ama kasoo shaqeeyey waxana filayaa inay kusoodhiiran lahaayeen madax badan oo ururkaas ugatirsan hada danahooda gaarka ah inay kusoobiiraan dawlada hadii mukhtaar is sharaxo oo wiliba ladoorto
Wax ma garad yahow wax xasuuso. Sheeko booyeeso waxaad kala xaajoon Xasan sheikh
Dasturka somalia iyo xeerka soomaaliyeed iyo sharciga Alle subxaana watacaala ma aqbalayo dhiigyacab in lagu abaal mariyo darajo yar ama weyn. Horta hore dambiiluhu so ma aha in uu cafis weydiisto cidii uu ehelkood laayey markaasna Alle cafis weydiisto. Markaas lagayaabee in la cafiyo oo uu umada wax la qaybsado. Roobow cafis ma weydiisan umada soomaaliyeed oo uu dambi kabaairka ka galey. Xirirka uma jarin saaxiibadiisii uu sharka la wadaagi jirey. Kaamuusa waantoobin miyir adeeygii iyo fikradihii qalocnaa oo uu ku dhaqmayey. Marka sidee buu u qaadi karaa masuuliyad sare oo wadankoo dhan saami weyn ku leh.. tankale yaa huba in ay kasoo baxa sharwadayaasha ay dhab tahay. Waxaa dhici kadha in roobow wali urukiisii ka tirsanyahay oo huu-haa’daanu tahay mid lagu khaldayo maangaabyada somaaliyeed